တရုတ်ပြည်က အစာအတတ်ဆုံးဖျာသည်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တရုတ်ပြည်က အစာအတတ်ဆုံးဖျာသည်…
Posted by Tony on Oct 1, 2011 in News, World News | 14 comments
China girl Ruo Xiaoan Sex
post ခေါင်းစဉ်သုံးတာ ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
သူမ၏ဆောင်ကြာမြိုင်၊ဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်မှ ဇတ်လမ်းများအား အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မျှဝေခံစားတင်ပြ
လေ ့ရှိသည် ့တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြည် ့တန်ဆာ ဘလော ့ဂ်ဂါ ရိုရှောင်အန် ဟာရဲတပ်ဖွဲ ့ရဲ ့ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ ့
သူမ အဖမ်းခံရသည် ့သတင်းဟာ (တရုတ်နိုင်ငံရဲ ့)အင်တာနက်ကမာ္ဘကိုတုန်လှုပ်ချောက်ခြားသွားရုံမျှမက
သူမရဲ ့ဘလော ့ဂ်ပရိတ်သတ်များအနေနှင် ့သူမအားကူညီ၊ ကယ်တင်ပါရန် တောင်းဆိုပန်ကြားခဲ ့ကြသလို၊
(သူမနှင် ့အိပ်စက်ပျော်ပါးခဲ ့ကြသည် ့) ဟန်ကျိူးမြို ့မှ ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေးသမားများနှင် ့ပညာရေးဌာနဆိုင်
ရာ အရာရှိကြီးများလည်း စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ ့ကြပါတယ်…
ရဲတပ်ဖွဲ ့အနေဖြင် ့သူမ၏ ဖုံးထဲမှ အစိုးရအရာရှိကြီးများနှင် ့တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများအပါအဝင်အထူးအ
ရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို ့၏ဖုံးနံပါတ်များအားတွေ ့ရှိခဲ ့ရတယ်လို ့သတင်းများကဖော်ပြခဲ ့ပါတယ်….
ထိုအချက်အလက်ကြောင် ့သူမ၏ပုံမှန်အားပေးသူဖောက်သည်များတွင် အစိုးရထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ပါဝင်နေလိမ် ့မည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအား သံသယရှိစေခဲ ့ပါတယ်…
ဘလော ့ဂ်ရွာထဲက…သပေါ ့ဖျာသည်မလေး မနှင်းဆီ အဲလေ…ရိုရှောင်အန်…
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ရို ဟာခုနှစ်တာကာလအတွင်း အမျိူးသားပေါင်း ၃၀၀ဝ ခန် ့နှင် ့အတူအိပ်စက်
မွေ ့လျော်ဖျော်ဖြေခဲ ့တယ်လို ့ဆိုပါတယ်…
စာရေး၊စာဖတ်တာကို စွဲလမ်းနှစ်သက်တဲ ့မိန်းကလေးဟာ သူမရဲ ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော ့ဂ်မှာ သူမနှင် ့ဆက်ဆံ
ခဲ ့သူများနှင် ့ပါတ်သက်သည် ့အကြောင်းများအားရေးသားကာ အွန်လိုင်းဘလော ့ဂ်ဖတ်သူများအားမျှဝေခံ
သူမရဲ ့အရေးအသားကောင်းမွန်လှတာကြောင် ့အစဉ်တစ်စိုက်လာရောက်ဖတ်ရှုသူပေါင်း၁သိန်း ရသောင်း
မျှရှိပြီး သူမအား စာရေးကောင်းသလို၊ အထာပေးကောင်းသည် ့ဇယားလေး လို ့နာမည်ပေးခဲ ့ကြပါတယ်..
သူမနောက်ဆုံး ပို ့စ်တင်ခဲ ့သည်က စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ ့မို ့သူမအားလွန်ခဲ ့သည် ့ရက်သတ္တပါတ်
က ဖမ်းဆီးခဲ ့ကြသည်ဟု ယုံကြည်ရပါတယ်…
အခြားတစ်ဦးကတော ့စာဖတ်ဝါသနာကြီးသည် ့ပါမောက္ခကြီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ဖြင် ့သူမကရေးသားခဲ ့ပါ
သူမတွင် အမျိူးသမီးဖောက်သည်တစ်ဦး(လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူအမျိူးသမီး) ပင်ရှိသေးသည်ဟု သူမကဆို
ရဲတပ်ဖွဲ ့ကိုတော ့သူမအားဖမ်းဆီးခဲ ့မှုနှင် ့ပါတ်သက်၍ အတည်ပြုရန်ဆက်သွယ်လို ့မရခဲ ့ပါဘူး…
http://whatsonjinan.com/tag-Ruo%20Xiaoan.html အစက သူ့ blog ရှိတဲ့နေရာပါ။ အခုတော့ ဖျက်လိုက်ပါပြီ………….
ဖျာသည်ဆိုတော့ ဖျာရောင်းတဲ့သူလို့ထင်နေတာ ။ -ာ သည်ကိုပြောတာဖြစ်နေတာပါပဲ ။ အင်း လူ 3000 တောင်မှ ဆိုတော့မလွယ်ဘူးပဲ ။ သူ့ကိုဖမ်းတဲ့သူတွေက် သူမကို ဘယ်အချုပ်ထဲမှာထားကြလဲမသိဘူးနော် ။
ရွာထဲက ဦးဖောရိန်းကတော့ တလောကမှ တရုတ်ပြည်က ပြန်လာတာ။ သူ့မေးကြည့်အုံးမှ..။ တရုတ် သူငယ်ချင်းပြောတာတော့ အဲဒီဘလော့ဂ်မှာ ရေးထားတာ မြန်မာဧည့်သည်တွေက မြန်လည်းမြန် မာလည်းမာသတဲ့။ မကြာခင်က သူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ မြန်မာတဦးဆို လှေသူကြီးလို့ပြောပေမဲ့ စပိဒ်ဘုတ်မောင်းတဲ့အတိုင်း ဆိုပဲ..။ စိတ်မြန်လက်မြန် ရှိတာကို ပြောချင်ပုံရပါတယ်..။
” ဦးဖောရိန်းကတော့ တလောကမှ တရုတ်ပြည်က ပြန်လာတာ ”
” မကြာခင်က သူနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ မြန်မာတဦးဆို လှေသူကြီးလို့ပြောပေမဲ့ ”
Trust me, I didn’t met her, too bad.
Isn’t she beautiful ???
သူ ့မိန်းမ နောက်က နေ တစ်ချိန်လုံး
မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်နေလို ့
မလှုပ်သာ ခဲ့ပါဘူး တယ့်ကွယ်
လက်သည်းဝှက်နည်း နိဿရည်း များ ကို
အင်း ဘလော့ဂါတွေ မျက်ခုံးလှုပ်လိုက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ယခုတော့ ရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့ တော်သေးတာပေါ့နော်..။
အာရက္ခ မြေသား says:
မဆန်းပါဘူးလို ့လဲမပြောသာလှပါ။ဖျာသည် လို ့ရေးတော့ မရိုင်းတော့ နားထောင်ရသက်သာတယ်လေ။
Blog of Hangzhou sex worker Ruo Xiaoan faked by male editor
The microblog of Ruo Xiaoan 1, which purported to be the posts ofafemale sex worker in Hangzhou and attracted enormous attention from media and internet users, was actuallyafake written byaman surnamed Lin, say local police according to Zhejiang Online.
The blogger, who garnered more than 260,000 followers by claiming to beaHangzhou sex worker writing about her encounters with customers was in facta31-year-old married man who plagiarized from foreign literature. He has been fined 500 yuan (US$80) by Hangzhou police for “disturbing social order” after uploadingalist of the fictional sex worker’s clients.
Lin used the pseudonym “A Hangzhou Woman Gone Astray” to publish 401 posts on his blog and used alluring tags such as “sex worker,” “hooker,” “whore” and “bottom” to draw attention to his tales.
The microblog got the attention of the police when one post claimed the sex worker had had sexual relations with over 3000 customers in the last seven years (she claimed to have entered the profession at the age of 15) and that there were close to one thousand customers’ phone numbers in her mobile phone, including university professors and governmental officials.
Police investigations soon traced the origin of the posts toahome in the provincial capital, where Lin was found hunched over his computer, writing — or rather copying — his latest titillating entry.
Lin,asenior editor ofacultural magazine in Zhejiang, copied foreign literature, translating them into Chinese and posting them in bite-size chunks on the microblog as the diary ofasex worker.
The diary comprised short sentences, some expressing Ruo’s feelings as she served her customers, some describing sexual scenes and some discussing the life ofaChinese sex worker with other online users.
The blog attractedafollowing of thousands, many comments dubbing the writer “China’s most talented prostitute,” while others tried to persuade her to quit beingasex worker and becomeawriter, praising her authentic and straightforward writing style. Yet, yet she said she loves many of her clients and doesn’t want to give up her live asaprostitute.
According to the blog, Ruo isa22-year-old female who has “gone astray” for more than five years. She lives in Hangzhou, loves reading and strolling around the scenic West Lake and hopes to live the life ofaphilosophical sex worker.
When the news that Ruo is actuallyaman came to light, some internet users declared themselves completely dumbstruck, while others have said that the punishment given to Lin is too light. In the alternate reality of the online world, some netizens have suggested Ruo is real and the exposure of Lin as the culprit is the true hoax on the part of the police, to protect the sex worker’s government clients.
What is known, however, is that the contents of the Ruo Xiaoan microblog have now been deleted.
အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ၊ ကယ်တင်ရှင် မရှိတော့ပြီလား၊ လှေသူကြီး ရေ ကယ်တင်ပေးပါ၊
ဟိ ။ ဟုတ်ပ မောင်မောင်လူဆိုးရေ ။ နှမျောစရာကြီေးနာ် ။ ဒီလိုလုပ်မယ်မှန်းကြိုသိရင် …. ဟင်း .. ဟင်း ။
မောင်တုတ် ကြီး says:
သံတွဲက အစ်ကိုတော် တွေရေ စိတ်လျှော့ စိတ်လျှော့။နှာသိပ်မထပါနဲ ့ဗျာ။
သံတွဲသား အဖွဲ ့ကနှာကြောလဲ ထတတ် ကြသားပါလား။အစ်ကို တို ့ရေစိတ်လျှော့။စိတ်လျှော့။
မိတ်ဆွေ … နှာမထသူသည် ဂန်ဒူး ဖြစ်သည်ဟု ထင်သည်၊ ဟုတ်နေပါသလား ၊
သဘာဝကို မလွန်ဆန်သင့်ပါပေ၊ လိုက်လျောညီထွေ အောင်နေတတ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေသည်။
ဟုတ်. ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အသက်ကြီး မှနှာဘူး ထနေသူများကိုသာပြောလိုက်ခြင်းနေမှာပါ။လူငယ်များကို မဟုတ်တန်ပါဘူး။
“Both Obama and US Secretary of State Hillary Clinton tried to scare monger by exaggerating “security concerns”. ”